Drakabergets SK ကို – မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်စနိုးမိုဘီလ် | Holmbygden.se
Draka တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရဲ့စနိုးမိုဘီလ်ကလပ် SK ကို – မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်စနိုးမိုဘီလ်
Draka တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရဲ့စနိုးမိုဘီလ်ကလပ်စနိုးဆိုင်ကယ်စီးနေသည်များအတွက်ကလပ်ဖြစ်ပါသည်- Holmes နှင့် Liden ဝနျးကငျြမှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်နိူး.
ဆောင်ပိုအဆက်အသွယ် M.M.. ဤနေရာတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်.
Drakaberget.se – အဆိုပါကလပ်ရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်
လက်ရှိခေါင်းဆောင်ပိုင်းကနေဓါတ်ပုံတွေကိုအတူ Draka တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ M.M. အလုပ်လုပ်တယ်.
အထက်ပါခရိုင်အတွင်းရှိဒေသခံကလပ် ledkarta အပေါ်အခြေခံပြီး Holmes ခရိုင်အတွင်းရှိစနိုးဆိုင်ကယ်စီးနေသည်လမ်းကြောင်းတစ် clipping ဖြစ်ပါသည်. Holmsjönနှင့်အသေးစားရေကန်များရေခဲစာရွက်များ၏အခြေအနေပေါ် မူတည်. လည်းသင်တန်း၏ပုံမှန်အတိုင်းသင်္ဘောလမ်းကြောင်းများရှိဖြစ်ပါသည်. အပြည့်အဝမြေပုံ View.
အဆိုပါအယူအဆအနာဂတျမှာမှတ်ထားတဲ့ GPS စနစ်လမ်းကြောင်းနှင့်အတူပိုကောင်းတဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ် ledkarta ပူဇော်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်. သင်သည်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုတစ်ဦးဂျီပီအက်စ်လမ်းကြောင်းရှိသည် Do? ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးနဲ့ကူညီ.
Draka တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရဲ့ SK ကိုထံမှနောက်ဆုံးရသတင်း
24/3: STORT TACK FÖR DAGENS PIMPEL! Nu är årets pimpeltävling tillända, fint väder även fast det blåste lite  En härlig dag och superkul tycker vi att de kom så pass många o... ဆက်ဖတ်ရန်
22/3: Sladdat sjöändan-norrsjön ဆက်ဖတ်ရန်
22/3: Nysladdat navarn-sjöändan-holmssjön ဆက်ဖတ်ရန်
22/3: Nysladdat mellan Boda- Brudsjön ဆက်ဖတ်ရန်
18/3: Pimpeltävling 2019 Du har väl inte glömt att boka in den årliga pimpeln?  Ser ut att det ska bli bra väder också, välkomna! အဆိုပါ 23:e mars anordnar vi tillsammans med Lidens Nedre... ဆက်ဖတ်ရန်
19/5: Berg က, Härjedalen ...
အကြောင်းကို၏ဆင်း active ပါဝါ 4500 Berg က၏ ... ဆက်ဖတ်ရန်
15/5: Tennissiffror ဈ Prem ...
15/5: မူလစာမျက်နှာ Premiere ikväl ...